Hogaamiye ka tirsan Ikhwaanul Muslimiinta Dr. Essam Al-Erian ayaa ku dhex dhintay xabsiga… – Hagaag.com
Hogaamiye ka tirsan Ikhwaanul Muslimiinta Dr. Essam Al-Erian ayaa ku dhex dhintay xabsiga…
Posted on 13 Agoosto 2020 by Admin in World // 0 Comments
Ilo wareedyo dhanka ammaanka ah ayaa sheegaya in hogaamiyaha Ikhwaanul Muslimiinta, Dr. Essam Al-Erian, uu ugu dhintay wadno xanuun xabsiga al Caqrab ee sumcada xun ee magaalada Qaahira, isagoo ku dhintay 66 sano jir.
Qareenka Ururka Ikhwaanul Muslimiinta, Abdel Moneim Abdel Maksoud, ayaa wareysi uu siiyay wargeysyada maxalliga ah ku sheegay in uu subaxnimadii ka helay fariin Waaxda Maamulka Xabsiyada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, isaga oo lagu wargaliyay geerida hoggaamiyaha Ikhwaanul-muslimiinta Essam Al-Erian gudaha xabsiga.
Sida uu sheegayo Abdul-Maqsoud, isaga iyo qoyska Al-Erian ma aysan awoodin inay arkaan muddo lix bilood ah, ka dib markii mas’uuliyiinta ay joojiyeen booqashooyinka xabsiga si looga hortago faafida cudurka coronavirus.
Al-Erian ayaa wuxuu qabtay dhowr jago oo hoggaamineed ee kooxda ka hor intaan la xirin ka dib afgambigii milatari.
Al-Erian ayaa waxaa lagu xukumay xukunno badan oo uu ku jiro xabsi daa’in sanadihii ka dambeeyay afgambigii ka dhanka ahaa Madaxweynihii hore Maxamed Morsi, oo ay ku jiraan qadiyadii lagu weeraray xuduudaha bariga, dhacdadii Qalioub iyo kiiska dhacdadii Badda Weyn.